Aroor Maroodi iyo Itaal Atoor – Kaasho Maanka
Bishu waa April Saacaduna waa labadii duhurnimo qorraxdu waa kulayl daran, hayeeshee waxaa fadhiya harada ama ceegaaga biyo uu dhigay roobkii guga.
Darka Harada waxaa taagan raxan Sagaaro ah oo Harada ka cabtay, waxay la tahay sagaarada oo uu madax u yahay Atoor lagu magacaabo Geeswayne in ay ayagu leeyihiin Harada oo dad iyo duunyaba aysan dul imaan. Haddii ay saas dhacdana Geeswayne wuxuu diyaar u yahay in uu geesihiisa ku dagaal galo siharadu u ahaato wax u gaar ah bah sagaaro.
Sagaaro oo saas talo ku moostay ayaa waxaa dhinaca bari ka soo muuqday raxan Maroodi ah oo is daba joogta kuwaas oo aroor ku soo ah Harada ama baliga. Maroodi ma filayo in sagaaro gudoonsatay in haradu u gaar tahay, hase ahaatee wuxuu kor ka dareemay in Sagaaro aysan rabin in Maroodi biyaha ka cabo, hayeeshee Maroodi ma rabo in uu dagaal ku galo meeshaas oo waxay la tahay Intuu ka cabo in uu isaga tago Harada iyo sagaaro.
Markii uu soo istaagay Harada qarkeeda wuxuu ku bilaabay sidan “Sagaaro see tihiin, waan oomanahay meel fog baan ka nimid afar maalmood baan soo soconay oo hayaan dheer baan soo galnay waxaan rabnaa in aan balliga ka cabno“.
Atoorkii sagaarada baa hadalka qaatay wuxuu ku jawaabay sidaan: “Maroodi biyo maanta kama cabaysid halkaan ee waxaad yeeshaa hadalka badan iska daa oo oonkaaga la laabo“
Maroodi oo la yaaban Atoorka ayaa hadalkii qaatay oo yiri: “Atoor adigu biyaha ma lihid oo dhaxal oo aad helin tan kale adigu Harada ma lihid, waxaa intaas dheer anigu intaan cabo ayaan kaaga tagayaa oo markaas saad doonto ka yeel, balse maanta aan biyaha cabnee na daa“.
Atoor inta booday oo geesi ha ku jiiday geed jilan ah buu ku jawaabay: “haka yaabin geeskaas baa kuu diyaar ah hadaad tagi waydo“.
Maroodi oo haraad iyo oon qaba waa is hayn waayay wuxuuna garwaaqsaday in Atoor dagaal mooye nabadi ka dhawayn, hayeeshee wuxuu is waydiiyay sida uu oola dagaali karo Atoor, wuxuu is yiri ma cagtaad saartaa, magacankaad ku dhuftaa? oogu danbayn wuxuu gudoonsaday in Atoor uusan cagtiisa saarin taas badalkeeda Maroodi wuxuu go’aansaday in Atoor ku haboon yahay in uu digadiisa dusha ka saaro si uu quus oogu rido sagaaro in aysan awood u hayn dagaalka Maroodi.
Markii uu digada dusha ka saaray Atoor wuxuu ku dhammaaday oo ku xabaalmay ciida hoosteeda. Sagaaradii intii ka hartay halkaas bay ku quusteen markay arkeen waxa ku dhacay Atoor Geeswayne waxayna go’aan ku gaareen in ay digada aruuriyaan si ay Maroodi ooga aar gutaan, hayeeshee waxaa is waydiin ah digada sagaaro Maroodi ma dili kartaa ? Si kastaba ha ahaatee ilaa maanta sagaaro waxay aruurisaa digadeeda iyada oo qorshuhu yahay dilka maroodi waana tan aan maalin kasta aragno Sagaaro oo meeshay marto tuumisa digo.
Sheekada Atoorka iyo Maroodiga waxaa si dhaxalka gashay oo farshaxannimo ku jirto noogu soo gudbiyay gabayaagii Faarax Xuseen Sharmaake Asaga oo u hanjabaya nin gabayaa ah oo ay is hayeen. Gabayga oo dheeraa waxaan ka soo qaatay in taan gaaban.
Atoor guunyo Sagaariyo Maroodaa is ilaaqay,
Maroodoow orka ama uunka ka ku luud,
Adinkuu kala faanoo diguu oofta ka saaroo turaabtuu ku idleeeyay.Faarax Xuseen Sharmaake
W/Q: Warsame Jaamac 16th May 2020